2019 ရောက်သွားတဲ့ Game Of Throne ရဲ့ final season – REDPlayer
GOT (game of thrones ကိုအမှတ်တရရှိနေကြသေးရဲ့လား၊ ဒါမှမဟုတ် မေ့နေပြီလား။ သေချာတာကတော့ သူ့ရဲ့ fan တွေအနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာရော နောက်ဆုံး final season ကိုကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားမိနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ ဝမ်းနည်းစွာပဲ ကျွန်တော်တို့ ဆုတောင်းမပြည့်တော့ပါဘူး။ episode6ခုပါတဲ့ GOT ရဲ့ final season ကို 2019 မှပဲ ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့ director တွေကမနေ့ကပဲ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်လပိုင်းလောက်မှာဖြစ်မလဲဆိုတာလည်း မပြောထားပါဘူး။
Diretor တွေကတော့ David Nutter, Miguel Sapochnik, David Benioff နဲ့ D.B. Weiss တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးချောလေး Sophic Turner ကလည်း မနှစ်ကပြောထားတယ်မဟုတ်လား၊ 2019 အထိတော့ final episode ကိုမြင်ရဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့။ ပြီးတော့ HBO ရဲ့ program president ကလည်း 2019 လောက်မှပဲ GOT ကိုပြန်မြင်ရနိင်တယ်ပြောထားတာကိုး။
GOT အတွက် ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အပြင် producer တစ်ဦးလည်းဖြစ် ဇာတ်ညွှန်းဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Cogman ကတော့ GOT ကိုပဲဆက်လက် လက်ဆင့်ကမ်းမယ့် သီးခြား ဇာတ်လမ်းတွဲ ၄ ခုလောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးက concept မှာပဲရှိနေပြီးတော့ wirting stage မရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာ တကယ်ဖြစ်လာမယ်လို့ ဘယ်သူမှလည်းအာမ မခံနိုင်ကြပါဘူး။
ပြောရရင်တော လောလောဆယ်အချိန်မှာ final season ကို leak ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်တွေ အများအပြားရိုက်ကူး နေရင်း လွှင့်မယ့် အချိန်က 2019 ရောက်သွားတယ်ဆိုတာပါပဲ။
GOT (game of thrones ကိုအမှတျတရရှိနကွေသေးရဲ့လား၊ ဒါမှမဟုတျ မနေ့ပွေီလား။ သခြောတာကတော့ သူ့ရဲ့ fan တှအေနနေဲ့ ဒီနှဈမှာရော နောကျဆုံး final season ကိုကွညျ့ရလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ထားမိနိုငျပါတယျ။
ဒါဆိုရငျတော့ ဝမျးနညျးစှာပဲ ကြှနျတျောတို့ ဆုတောငျးမပွညျ့တော့ပါဘူး။ episode6ခုပါတဲ့ GOT ရဲ့ final season ကို 2019 မှပဲ ထုတျလှငျ့ပွသတော့မှာ ဖွဈတဲ့အကွောငျး သူ့ရဲ့ director တှကေမနကေ့ပဲ ကွငွောခဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ ဘယျလပိုငျးလောကျမှာဖွဈမလဲဆိုတာလညျး မပွောထားပါဘူး။
Diretor တှကေတော့ David Nutter, Miguel Sapochnik, David Benioff နဲ့ D.B. Weiss တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ မငျးသမီးခြောလေး Sophic Turner ကလညျး မနှဈကပွောထားတယျမဟုတျလား၊ 2019 အထိတော့ final episode ကိုမွငျရဦးမှာ မဟုတျပါဘူးလို့။ ပွီးတော့ HBO ရဲ့ program president ကလညျး 2019 လောကျမှပဲ GOT ကိုပွနျမွငျရနိငျတယျပွောထားတာကိုး။
GOT အတှကျ ဇာတျညှနျးရေးဆရာတှေ အမြားကွီးရှိတဲ့ အပွငျ producer တဈဦးလညျးဖွဈ ဇာတျညှနျးဆရာတဈဦးလညျးဖွဈတဲ့ Cogman ကတော့ GOT ကိုပဲဆကျလကျ လကျဆငျ့ကမျးမယျ့ သီးခွား ဇာတျလမျးတှဲ ၄ ခုလောကျရှိနတေယျဆိုတာပွောခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါတှအေားလုံးက concept မှာပဲရှိနပွေီးတော့ wirting stage မရောကျသေးတဲ့အခြိနျမှာ တကယျဖွဈလာမယျလို့ ဘယျသူမှလညျးအာမ မခံနိုငျကွပါဘူး။
ပွောရရငျတော လောလောဆယျအခြိနျမှာ final season ကို leak ဖွဈမှာစိုးလို့ ဇာတျလမျးအဆုံးသတျတှေ အမြားအပွားရိုကျကူး နရေငျး လှငျ့မယျ့ အခြိနျက 2019 ရောကျသှားတယျဆိုတာပါပဲ။
Tags game of throne HBO movie videos